बिदाईमा बोल्दा बोल्दै भक्कानिए कलमान ! हेर्नुस कुलमानको मनछुने भाषण ( हेर्नुस भिडियो ) |
बिदाईमा बोल्दा बोल्दै भक्कानिए कलमान ! हेर्नुस कुलमानको मनछुने भाषण ( हेर्नुस भिडियो )
२०७७, ३० भाद्र मंगलवार २१:०४ September 15, 2020 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बिदा भएका छन्। चार वर्षे कार्यकाल सोमबार पूरा गरेपछि मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङ बिदा भएका हुन्। सरकारले उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला उनले एउटै व्यक्ति एउटा जिम्मेवारीमा सधै रहिरहनुपर्छ भन्ने नभएको बताए। उनले केही पनि विकल्परहित नरहेकोसमेत प्रष्ट पारे।